केही मानिसहरू वास्तवमा मा बैगुन भारत हामीलाई ल्याइएको एक बेरी छ भनेर थाह छ। फल एक लम्बी लम्बाइ र नीलो-कालो रंग, तिनीहरूले "सानो नीलो" भनिन्छ किन छ। बैगुन एक प्रकारको को स्वाद, तर यो सही तयारी संग, तपाईं अचम्मको स्वाद र दैनिक खानाको लागि मात्र होइन तयार गर्न सकिन्छ कि व्यञ्जन विविधता, तर पनि एक उत्सव तालिका प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने टिप्पण लायक छ।
धेरै अर्थमा यो मासु र लगभग सबै तरकारी यो उत्पादन राम्रो अनुकूलता कारण हो। विशेष रूप तालिका भरी हेर्न हुनेछ बैगुन, व्यञ्जनहरु ठूलो धेरै छन् जो, र तिनीहरूलाई केही ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ।
यो बैगुन को तयारी धेरै समय लाग्न गर्दैन टिप्पण लायक छ, र फलस्वरूप एक कोमल स्वाद र मूल पकवान गर्न सक्नुहुन्छ। खाना परम्परा आधारमा, तपाईं सामाग्री को एक किसिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
भाँडा prigotovleinyu गर्न अघि बढ्नु अघि, फल तयार हुनुपर्छ। यसो गर्न, तिनीहरूले धोए र सुकेको छन्। तपाईं तयार कसरी निर्भर भएको बैगुन कटौती। तपाईं टिप बन्द काटन, दुई आधा यसलाई कटौती गर्न सक्नुहुन्छ, र पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ र innards हटाउन। तपाईं भरी बैगुन पकाउन अघि, फल नरम सम्म ओवन मा Bake गर्नुपर्छ।
मासु, टमाटर र प्याज - को fillings सबैभन्दा साधारण छुट्याउन सक्नुहुन्छ। (मासु कीमा, diced तरकारी) मिश्रित सामाग्री र बैगुन भरिएका हुन्छन्। यो भराई नै रसदार, तर तपाईं एक सानो मेयोनेज थप्न र grated पनीर संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। यो नुस्खा एक appetizer रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र यो एउटा स्वतन्त्र दोस्रो पकवान रूपमा सम्भव छ। गोरुको मासु एकदम सफलतापूर्वक चिकन वा पोर्क विकल्प।
को हिउँदमा, यो यस्तो नाश्ता स्थिर बैगुन तयार लागि उपयोगी छ। तपाईंले तिनीहरूलाई किन्न वा आफ्नै तयार गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, धोए र हल्कासित आधा, स्लाइस वा पकाउने क्रममा पछि आवश्यक अन्य प्रकारका मा फल कट obsushennye र पलीथीन वा अन्य उपयुक्त कन्टेनर मा फ्रीजर मा राखिनेछ।
भरी बैगुन को तयारी को लागि अर्को मूल भर्नको छ तरकारी संग भात। पूर्व-पकाएको भात चोट टमाटर, गाजर र साग जोडिएको हुनुपर्छ। यो मिश्रण संग भरी बैगुन आधा एक घण्टा ओवन मा राखिएको छ - र एक महान छुट्टी तालिकाको लागि appetizer तयार छ। साथै, तपाईँले अतिरिक्त भरने छम, मशरूम र पनि झिंगा लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
संरक्षण - को बैगुन प्रयोगको लागि हिउँदमा खाना राख्नको लागि अर्को तरिका हो। धेरै लोकप्रिय मसालेदार भरी बैगुन छन्। यो गर्न, पाकेको फल को खुट्टा वरिपरि incised छ, पकाएको र त्यसपछि तरकारी भराई संग भरी सम्म 40 मिनेट को लागि खाना पकाउन। भरने लागि, तपाईं लिन सक्छ गाजर, प्याज, लसुन र जडीबुटी। परीक्षण गर्न नडराऊ, यो अन्य तरकारी (जस्तै, बन्दागोभी) को स्वाद, त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ भने यति कारण impromptu गर्न, सुन्दर पाक Delights जन्म भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
भराई पनि लायक भुट्नु आधा पकाएको सम्म, (प्रति किलोग्राम बारेमा दुई चमचा) स्वाद नुन थप्न र त्यसपछि तिनीहरूलाई eggplants डम्प। त्यसपछि तयार फल कस एक जार मा राखिएको र कोठा तापमान मा धेरै दिनको लागि बाँकी। एक हप्ता पछि, यो पकवान, खान तेल छिडकना गर्न पहिले नै सम्भव छ।
तसर्थ, भरी बैगुन सख्त व्यञ्जनहरु द्वारा मात्र तयार गर्न सकिन्छ, तर पनि कल्पना गर्न स्वतन्त्र rein दिनुहोस्। यो फल सफलतापूर्वक मात्र होइन तरकारी, तर पनि मासु, पनीर, पागल र अन्य उत्पादनहरु स्वाद संयुक्त छ। समाप्त पकवान मेयोनेज हुन वा कागति को रस, खट्टा क्रीम सस संग सेवा संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। परिणाम मात्र होइन ठूलो पक्ष पकवान, तर पनि एउटा छुट्टै पकवान स्वादिष्ट हुन सक्छ।
पास्ता कसरी खाना पकाउनु, तिनीहरूलाई अलग गर्न
कसरी multivarka मा पाकेका स्याउ खाना पकाउनु?
स्क्विड सलाद कसरी खाना पकाउनु?
र तपाईं खीरे संग turbid बैंक यदि के गर्न थाहा छ?
तिल: खान के र यो भूमिगत एकान्तवासी कसरी बाँच्न
Amitabh बच्चन। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन र असफलता भन्दा बलिउड अभिनेता पछि खोजे
यस शताब्दीको अन्तसम्ममा2अर्ब जलवायु शरणार्थी प्राप्त हुन सक्छ
कसरी काउन्टरटप चयन गर्न
रोजगार सम्झौता को समापन
भियतनामको बारेमा जान्न मनपर्छ: गणतन्त्रको राष्ट्रपति
महान् महल, Peterhof: वर्णन, इतिहास, वास्तुकला र रोचक तथ्य
बिरालोहरु मा विद्रधि: घर मा उपचार